रात बिताउने प्रस्ताव कति कति : उरुषा पाण्डे मोडल | www.aagopani.com Halloween Costume ideas 2015
रात बिताउने प्रस्ताव कति कति : उरुषा पाण्डे मोडल
उरुषा पाण्डे कलाकारीतामा चिनाई रहनु पर्ने नाम होइन । मोडलिङ हुँदै अभिनय करियर सुरु गरेकी पाण्डेले छोटो समयमा लामो फड्को मार्न सफल भएकी छन् । नेपाली कलाकारीतामा जम्दै गरेकी पाण्डे हलिउडको निर्माणाधिन एक चलचित्रमा समेत अनबन्धीत भएकी छन् । हलिउड चलचित्र अभिनय गर्न जाने तरखरमा रहेकी पाण्डेसँग गरिएको छोटो कुराकानी ।
हलिउड चलचित्रमा काम गर्न जाँदै हुनुहुन्छ, तयारी के गर्नु भएको छ ?
– हलिउडमा बन्दै गरेको चलचित्र ‘द ग्यादरिङ’मा काम गर्न जाने तयारीमा गरेकी हुँ । त्यसका लागी चलचित्र युनिटले भने बमोजिम तयारी गरिरहेकी छु ।
‘द ग्यादरीङ’ कस्तो चलचित्र हो र तपाईको भूमिका थाहा छ ?
– एक्सन प्रधान चलचित्र हा । चोरीको कथाबस्तुमा चलचित्र बन्न लागेको मलाई बताइएको छ । विषेशत बैंकमा चोरी हुन्छ, चोरीमा सलग्न मध्येमा म पनि छु । त्यहाँ नेपालमा जस्तो कसको ठुलो कसको सानो भूमिका भन्ने हँदैन । सबैको उस्तै भूमिका हुने गर्दछ । मेरो त्यसमा एक्सन रोल रहेको छ बताइएको छ ।
यो क्षेत्रमा प्रवेश गर्नु भएको कति समय भयो र ?
– त्यति धेरै समय नभए पनि म आफैले तीन वटा सर्ट मूभि बनाएको छु । जुन प्रदर्शनमा पनि आईसकेको छ । म प्रेम कथामा आधारीत भन्दा पनि बिषय परक चलचित्र बनाउने र काम गर्ने खालकी केटी हँ। म गित पनि लेख्ने गरेको छु ।
चलचित्र क्षेत्रमा काम गर्न परिवारको कस्तो सहयोग छ ?
– पहिला त समस्या हुने गर्दथ्यो तर अहिले परिवारले यो क्षेत्रको बारेमा बुझिसकेका छन् । अहिले कुनै पनि समस्या छैन । अहिले त परिवारले सहयोग नै गर्नु भएको छ ।
नेपाली चलचित्रमा काम नपाएर हलिउडमा जान लाग्नु भएको हो र ?
– हैन, नेपाली चलचित्रमा पनि अफर आएको हो । तर राम्रो चलचित्रमा अफर आएन । राम्रो विषयबस्तु भएको चलचित्रमा अफर नआएकाले काम नगरेकी हुँ ।
किन कुरा मिलेन र ?
–नेपाली चलचित्रकर्मीको माग अनौठो छ । मलाई मन परेन । उनीहरुले तपाईसँग समय बिताउन चाहेको भन्न खोज्नु भएको हो । किन भने म यो क्षेत्रमा लागेको, भर्खरै हो । म काममा विश्वास गर्छु, त्यसैले राम्रो काम गर्छु कसैसँग रात बिताउनु पर्छ भन्ने मान्यता कहिल्यै राखिन र राख्दिन पनि ।
रात बिताउने अफर पनि आउने गर्छन् र ?
– आउने गर्छन् । म सिधै अस्विकार गर्छु । मलाई परिश्रम गर्नु छ, शरिर देखाएर चर्चामा आउनु छैन । नेपाली चलचित्रमा अर्धनग्न तस्विर सार्वजनीक गरेर चर्चामा आउने चलन छ नि रु म राम्रो कलाकार बनेर देखाउछु, जसले अहिले मलाई काम दिन्छु भनेर फोन उठाएनन्, उनीहरुलाई जवाफ दिनु छ । म आफ्नो अर्ध नग्न तस्विर सार्वजनकि गरेर कहिल्यै पनि चर्चामा आउँदीन । मलाई नाँगिएर दर्शकको मन जित्नु छैन ।
अहिले सम्म त्यस्तो तस्विर खिच्नु भएको छैन र ?
–ग्ल्यामर फोटो त खिचेको छु । तर सेक्सी, अर्ध नग्न तस्विर छैनन् । सेक्सी देखिन नाङगीनै पर्दैन, मान्छेलाई त आँखाले पनि सेक्सी देखाँउछ । मलाई नाङगो जिउ देखाएर भन्दा फेसको एक्सपीरियन्सले नै सेक्सी देखाँउछ । कलाकारको ग्ल्यामरस भनेको फेसमा हुनुपर्छ, शरिरमा होइन ।
तपाईलाई मन पर्ने कलाकार र ?
–हरिवंश आचार्य, माधुरी दिक्षित, श्री देवी, साकिरा मनपर्छ । तपाई प्रेममा पर्नु भएको छ की छैन रु अहिले सम्म छैन ।
आजसम्म कसैले प्रपोज गरेका छन् की छैनन् र ?
उमेर हो प्रपोज त गरिहाल्छन् नी । तर मैले यो विषयमा सोच बनाएकी छैन । कसले कति प्रपोज गऱ्र्यो भनेर मैले गनेको छैन् ।
तपाई अश्लिल चलचित्र कत्तिको हेर्नुहुन्छ र?
–हेरेको छैन् ।
प्रेम गरेको छ र ?